သင်၏ B2B ဒေတာများကိုရှင်းလင်းခြင်း Crowdsource | Martech Zone
သင်၏ B2B ဒေတာများကိုရှင်းလင်းခြင်း
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 6, 2011 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါမှာရှေးရှေးနှင့်အတူကြီးစွာသောဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့ပါတယ် NetProspexသင်၏လုပ်ငန်းကိုစီးပွားရေးအဆက်အသွယ်မှတ်တမ်းများသို့တိုးမြှင့်အတည်ပြုရန်ခွင့်ပြုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်ဆော့ဝဲလ်။ စနစ်သည်အတော်လေးကြွယ်ဝပြီး၊ ၂၂ သန်းကျော်အတည်ပြုပြီးသော B21B အဆက်အသွယ်များအပေါ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားသည်။
တခါတရံအမည်တစ်ခု၊ အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသို့မဟုတ်ပါတီတစ်ခု၏အချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်လူတို့သည်နှစ်အနည်းငယ်တိုင်းအလုပ်အကိုင်များရွှေ့ပြောင်းကြရသဖြင့် B2B ဒေတာဘေ့စ်များသည်မကြာခဏရပ်တန့်သွားသည်။ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းသည်သင်၏အီးမေးလ်ပေးပို့မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ရောင်း ၀ ယ်မှုအဖွဲ့ကိုအချက်အလက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်သောအခါမကူညီနိုင်ပါ။
NetProspex သည်သင်၏ CRM နှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးမကြာမီတွင်ကမ်းလှမ်းသည် API ကို ပြင်ပစနစ်များသည်သူတို့၏အချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထပ်တိုးမက်လုံးပေးမှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်အသစ်သောမှတ်တမ်းများကို NetProspex သို့တင်သောအခါသင်သည်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးနေသည့်လူစုလူဝေးထဲမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကတည်းကသင်ကအကြွေးတင်နေသည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီအသစ်များကို ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ထိုဖောက်သည်များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤတွင် Netprospex အလုပ်လုပ်ပုံ
အသုံးပြုသူများသည်အဆက်အသွယ်အသစ်များအတွက်လဲလှယ်ရန်အတွက် NetProspex ဒေတာဘေ့စ်သို့အဆက်အသွယ်များကိုထည့်ပါ။ အမျိုးမျိုးသောစီးပွားဖြစ်နည်းပညာများကိုလူစုလူဝေးအရင်းအမြစ်မှရရှိသောအချက်အလက်များကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ရန်နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဒေတာဘေ့စ်၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။
NetProspex ၏ဝက်ဘ်အခြေပြုရှာဖွေရေးကိရိယာသည်တိကျသောပစ်မှတ်ထားပရိသတ်သို့ပိုမိုမြင်သာမြင်သာစေပြီးအသုံးပြုသူအားအလုပ်အကိုင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစား၊ ပထဝီအနေအထား၊ ကုမ္ပဏီ၊ အမည်၊
အဆုံးမှတ်တမ်းကိုဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊ လူမှုပရိုဖိုင်းသတင်းအချက်အလက်များ၊ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မှတ်တမ်းကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုသည့်နေ့စွဲနှင့်ရမှတ်များကိုပေးသည်။
စနစ်သည်စံချိန်တင်နှုန်း $ 0.75 မှစတင်၍ (အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြင့်) အတော်လေးတတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင် download ချထားခရက်ဒစ်တစ်ခုကို ကြိုတင်၍ ၀ ယ်ပါကမှတ်တမ်း ၁ သန်းအတွက်စံချိန်တင်နှုန်း ၁၈ ဆင့်သို့ရောက်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ယခင်ကဒေတာသန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူသူမည်သူမဆိုအတွက်…ဒါဟာတော်တော်လေးစျေးကြီးသည်။ သင်၏တင်ပို့မှုများအတွက်လည်းသင်၏အကြွေးရရှိမှုကိုမမေ့ပါနှင့်!
NetProspex's ကိုလည်းသင်သုံးနိုင်သည် ရှာဖွေနိုင်စွမ်း:
ဤကဲ့သို့သောစနစ်သည်နည်းနည်းဆိုးနေနိုင်သည်ဟုထင်သောသင်တို့အတွက်သူများသည်စံချိန်ကို NetProspex သို့ကူးပြောင်းသောအခါအဆက်အသွယ်ကိုအကြောင်းကြားပြီး ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကို NetProspex ဒေတာဘေ့စ်မှဖယ်ရှားရန်အခွင့်အလမ်းသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအလေးမထားပဲစုဆောင်းပြီးရောင်းတဲ့အခြားစနစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထို့အပြင် NetProspex သည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားအီးမေးလ်အတွက်မှတ်တမ်းများကိုအသုံးမပြုမီ CAN-SPAM လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ဂူဂဲလ် Analytics - အကောင့်မျိုးစုံ (Code New)
6:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 35
ဒါဆို Doug၊ ဒါက ကြော်ငြာတစ်ခုလား။ ဂုဏ်ကျက်သရေရှိသော ကြော်ငြာနေရာချထားမှုထက် ဘာမှမပိုပုံရသော ဤဆောင်းပါးတွင် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လိမ်ညာမှုများစွာကို သင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်၏တရားဝင်မှုကို အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာအပိုင်း... ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာသည် ၎င်းတို့၏စာရင်းတွင် ပါရှိသောကြောင့် ၎င်းသည် မမှန်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး "ဟေ့၊ ငါတို့ မင်းရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာကို တခြားလူတွေကို ရောင်းရင် မင်းစိတ်မဆိုးဘူးလား?" အဖြေက ဘာလဲ ဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့်ရအောင်။
ကျွန်ုပ်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာသည် ဤဒေတာဘေ့စ်တွင် ရောက်သွားပြီး ၎င်းကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ ဤမယုံနိုင်လောက်အောင် ရက်ရောသောသူများသည် “Mr. ဖောက်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ရောင်းချမှုမှ အမြတ်အစွန်းကို မပျော်ရွှင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော deadbeat လက်လီရောင်းချသူအချို့ထံမှ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သူသည် သင့်အား ရောင်းထွက်သွားသည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်များကို အခြားသူများထံ ရောင်းချမည်ဆိုပါက သင်သဘောတူပါသလား။ "ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူ 21 သန်းဟာ သူစိမ်းတွေရဲ့ spam တွေကို ခံရဖို့သဘောတူမှာမို့လို့ပါပဲ။ အနည်းငယ်ထူးခြားပုံရသည်၊ မထင်ဘူးလား။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တချို့ကို NetProspex နဲ့ တော်တော်လေးကို ဆိုးရွားစေခဲ့တာကို သိရတာ ဝမ်းသာပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့အခက်အခဲကြောင့် သူတို့လုပ်ငန်းတချို့ ဆုံးရှုံးဖို့ပဲ မျှော်လင့်နိုင်တာပါ။
ဤတွင် အဓိကအချက်မှာ Doug; ကြုံရာကျပန်းဝယ်ယူရန် ကြော်ငြာများဖြင့် သူစိမ်းများကို အီးမေးလ်မပို့ပါနှင့်။ သက်ဆိုင်ရာ အမိုက်စားတွေ ဝယ်ဖို့ သူစိမ်းတွေတောင် စာမပို့ဘူး။ ၎င်းသည် သင့်အား ဆာဗာများမှ အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်းမှလွဲ၍ ဘာမှမလုပ်ဆောင်ပေးသည့် မအောင်မြင်သောဗျူဟာဖြစ်ပြီး သင်၏အဖွင့်နှင့် ကလစ်နှုန်းများကို စကားပုံကျောက်တုံးကဲ့သို့ ကျဆင်းစေပါသည်။ စပမ်းအီးမေးလ်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် ဖက်စ်များမှတစ်ဆင့် သင်လုံခြုံစေမည့် ဖောက်သည်များသည် အမြတ်အစွန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အနိမ့်ဆုံးဘုံပိုင်းခွဲဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်က လူတွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားဖို့၊ သူတို့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မြန်မြန်ရိုက်ပြီး ညမှာ ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင် ဒါက မင်းအတွက် အစီအစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ သင့်ရည်မှန်းချက်သည် ဖောက်သည်များ၏သစ္စာစောင့်သိမှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ယုံကြည်မှုရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါက၊ ဤပရိုဂရမ်သည် သင့်ခေါင်းတလားရှိ သံချောင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ သစ္စာရှိ (အသိဉာဏ်ရှိသော) သုံးစွဲသူများသည် spammer များထံမှ မဝယ်ပါ။
10:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 20
သင်ဖော်ပြခဲ့သလား သို့မဟုတ် သင်မဖော်ပြခဲ့သလား- "မှတ်တမ်းတစ်ခုအား NetProspex သို့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်သောအခါ၊ အဆက်အသွယ်အား အကြောင်းကြားပြီး ဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကို NetProspex ဒေတာဘေ့စ်မှ ဖယ်ရှားရန် အခွင့်အရေးပေးထားသည်။"
အခု မင်း လိမ်တာ က ဘာ လို့ ထင် လဲ ငါ မသေချာ ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် မမှန် ဘူး လို့ ပြော တဲ့ အခါ ၊ အဝေး မှ မှန် တဲ့ အရာ က ဘယ်လို ဖြစ် လာ လဲ ၊ NetProspex သည် “ကျွန်ုပ်၏ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းပါ” ရန် ဘယ်သောအခါမှ မဆက်သွယ်ပါ။
တာဝန်သိအီးမေးလ်အသုံးပြုမှုအတွက် တာဝန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်နှစ်ချက်ကို ပြောပြပါရစေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ဂရုမစိုက်ဟု ယူဆခြင်းသည် "တာဝန်မဲ့" ဖြစ်သည်။ spam ဥပဒေနှင့် spam နည်းပညာများကို သိသာထင်ရှားစွာ သိရှိသူသည် ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို အပိုသတိမထားမိဘဲ ခဏတာမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်းမှာ “တာဝန်မဲ့” ဖြစ်သည်။ ယုတ်မာသောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကို အကျိုးအမြတ်အတွက် အသုံးပြုသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်၏တာဝန်မှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း လှပသောဆောင်းပါးများရေးရန် ဘလော့ဂါများကို လစာပေးသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်၏တာဝန်မှာ ၎င်းတို့သည် “ကွဲပြားသည်” ဟု ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂါတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောက်ပတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေကို ရေးနိုင်စေဖို့ ကျပန်းကုမ္ပဏီတွေဆီ ခရီးထွက်ရတာကို နှစ်သက်တာကြောင့် သင့်သုံးသပ်ချက်တွေအတွက် သင့်မှာ အခကြေးငွေမရရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သေချာပါတယ်။ အမှန်တော့၊ ဤဆိုက်ရှိ သင့်ဆောင်းပါးများ၏ အကျဉ်းချုပ်မျှသာ သင်က "ဆောင်းပါးများ" ဟူသော အသွင်အောက်တွင် ကုမ္ပဏီပစ္စည်းများ အများအပြားကို ချိတ်ဆွဲထားပုံရသည်။ လွတ်လပ်သောအတွေး၏နောက်ဆုံးခံတပ်ပင်မဟုတ်၊ ယနေ့ခေတ်တွင်မည်သူ့ကိုမျှမယုံနိုင်ပုံရသည်။
10:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 5, 25
နာမည်ဆက်ခေါ်ခြင်းနဲ့ စလိုက်ရအောင်။ လိမ်ညာခြင်းသည် “လှည့်ဖြားရန် တမင်တကာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သော မဟုတ်မမှန်သောစကား” ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ထုတ်ကုန်များအကြောင်း သတင်းနှင့်အချက်အလက်များကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အခမဲ့သတင်းအချက်အလက်ဘလော့ဂ်တစ်ခု ပေးပါသည်။ လိမ်ညာလိမ်ညာရင် ငါ့အလုပ်က ဘယ်လိုဆုလာဘ်လဲ။ ကျွန်ုပ်တွင် စာဖတ်သူမည်မျှရှိမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းကို အဘယ်ကြောင့် ဤကဲ့သို့ စွန့်စားရမည်နည်း။
ကျေးဇူးပြု၍ Netprospex မူဝါဒကို ဖတ်ပါ-
"အသုံးပြုသူများသည် NetProspex မှ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံရရှိခြင်းမှ ဖယ်ထုတ်ရန် ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ဖယ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အီးမေးလ်မက်ဆေ့ချ်များတွင် ပါ၀င်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို 1-888-826-4877 သို့ ရိုးရိုးဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။"
မင်း သူတို့ကို ခေါ်ခဲ့တာလား။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် ၎င်းတို့၏သရုပ်ပြမှုတွင် ကျွန်ုပ်အားဖော်ပြခဲ့သော တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်အတိအကျကို အစီရင်ခံပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်ကို မျှဝေခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသည့် “မနာလိုသော” လုပ်ငန်းကို သင်စိတ်ပျက်နေပါက ၎င်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ငါ မင်းကို အလေးအနက်ထားစေချင်တယ်။ မင်းပြောသလို လုပ်ခဲ့ရင် ငါဘယ်လိုမှ ခွင့်မပြုပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု သင်ထင်ပါက ၎င်းတို့ကို တရားစွဲပါ။ ၎င်းတို့သည် SPAM စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက သူတို့ကို သတင်းပို့ပါ။ ငါ မင်းကို မကူညီနိုင်ဘူး။ ငါသူတို့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ မင်းရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကို သူတို့ဆီ ငါမထည့်ထားဘူး။ ငါ မင်းဆီကို အီးမေးလ်မပို့ဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် FCC စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ပြီး ဆောင်းပါးများအတွက် အခကြေးငွေရနေပြီး ၎င်းကို ထုတ်မပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်ကို သတင်းပို့ပါ။ ငါ့စာအုပ်တွေ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ငါအာမခံတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ အလုပ်ကို သဘောကျသော ပရိသတ်ကြီး ရှိပြီး ဘလော့ဂ်သည် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ငါ မင်းရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှု မလိုဘူး။ မင်းရဲ့ စိတ်ဆင်းရဲစရာ လှည့်စားမှုတွေကို တခြားနေရာမှာ ယူလိုက်ပါ။
14:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 1, 43
"မှတ်တမ်းတစ်ခုအား NetProspex သို့ကုန်သွယ်မှုပြုသောအခါ၊ အဆက်အသွယ်အား အကြောင်းကြားပြီး ဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကို NetProspex ဒေတာဘေ့စ်မှ ဖယ်ရှားရန် အခွင့်အရေးပေးပါသည်။"
ဒါကို မင်းဆက်ပြီးရှောင်ပြီး မှတ်တမ်းအတွက် ငါမင်းကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်မေးချင်ပါတယ်၊ ဒါက သူတို့ရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးလား။ ဤအရာကို အတည်ပြုရန် သင်ကြိုးစားပြီးပြီလား သို့မဟုတ် ၎င်းအတွက် ၎င်းတို့၏စကားကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လက်ခံနေပါသလား။ ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ဟာ ကြော်ငြာတစ်ခုလိုဖတ်တယ်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ မမှန်ကန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို သေချာမလိုက်နာတဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့အတူ ပို့စ်တင်တဲ့အခါ၊ တိကျသေချာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို မစစ်ဆေးဘဲ တစ်စုံတစ်ခုကို ဘာကြောင့် အစီရင်ခံမှာလဲဆိုတာ တွေးနေမိတယ်။ လူသတ်မှုသံသယရှိသူကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ရှိ၊မရှိ မေးမြန်းပြီးနောက်တွင် အမှန်တရားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဖြစ် ၎င်း၏အဖြေကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် တူပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့ မင်းဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့ ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့ အပြစ်ပဲ။ မင်းက ဒါကို trolling လို့ခေါ်တယ်။ ဒါကို ပြုပြင်ခြင်း (ဒီနေရာမှာ ကြည်နူးဖို့ကောင်းနေတယ်) အမှားအမှန်လို့ ခေါ်တယ်။
ငါက မှင်စာဖြစ်ရင် မင်း ပထမစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်နေတာ။ မှင်စာမကျွေးပါနဲ့။